ကျွန်တော့်အိမ်: စပယ်ရှယ် ဟင်းချက်နည်း ကျမ်းစာအုပ်
NO နှင့် အားလုံးနောက်တွင် Behind the Scene
A Cool Song (3) US 2008 နာမည်အကြီးဆုံး Don't Stop ...
က - ကလေးငယ် ချစ်စဖွယ်
ခွေးတစ်ကောင်မှ လူလိုလို ခွေးလိုလို အကောင် မွေးဖွား...
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းပြောသော သူ့ သူငယ်ချင်း၏ ခွင့်...
စပယ်ရှယ် ဟင်းချက်နည်း ကျမ်းစာအုပ်
A Cool Song (2) ကမ္ဘာကျော် Apologize သီချင်းအား အတွ...
မြန်မာ နိုင်ငံရေးဟာသများ စုဆောင်းမှု
US Congress မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သမိုင်းတွင် ဆ...
အကြည်တော် စာအုပ်များ စုဆောင်းမှု
Happy Earth Day - Save the Earth!
သစ်သား တူ ၏ မကောင်းကြောင်း ပုံများနှင့် တစ်ဆင့်ပြေ...
ဘလောခ့် ရေးသူများ အတွက် Oasis တစ်ခု
အသွင် အသစ်ဖြင့် ကျွန်တော့်အိမ်
ကြောက်စရာကောင်းသော သေဆုံးမှုများ - အမှတ် ၁
ကျွန်တော့် 2008 အတာ သင်္ကြန်
A Cool Song (1) အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် Rihanna ရဲ့ Umb...
ကျွန်တော် အ၀တီး ခဲ့သော Half Moon Bay သင်္ကြန်
အ၀စားသွားရန် - ဒန်ပေါက်
Memories Playing LikeaFilm without Sound
A good tour for Olympic torch in San Francisco
World's Largest Economy ; The European Union
How pandas grow
Protestors climbed Golden Gate Bridge
What is Torncity?
Being familiar with Torncity's Crimes
8 Strange Foods
အခု အဲ့ဒီ ကျမ်းကြီးထဲမှာ အစုံပလုံ ရှိပါတယ်။ ကြေးအိုး မုန့်ဟင်းခါး က အစ၊ ဘယာကြော် မကျန်၊ အုန်းထမင်း ကြက်ဆီထမင်းများပါ အပါ၊ ငါးပိကြော်၊ ငရုတ်သီးထောင်း များပါတစ်ဆင့်၊ ဆီပြန်ဟင်းမျိုးစုံ၊ အသုပ် အမျိုးမျိူး၊ အသုပ်အမျိုးမျိုး၊ အကြော်အမျိုးမျိုး၊ တိုင်းရင်းသားဟင်းလျာများ၊ မြန်မာ့ဟင်းလျာများ၊ အိမ်ချက် နည်းလမ်းများ၊ အထူးနည်းလမ်းများ၊ အားလုံးစုံလင်စွာဖြင့် နည်းလမ်းပေါင်း ၂၀၀ကျော် ပါဝင်ပေါင်းစည်းထားသော အထူးကျမ်းကောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း တီးမှတစ်ဆင့် ပြန်လည် ပြောကြားလိုပါသည်။
ကျမ်းကြီးကို ပြုစုသူက တော့ ကိုဒုက္ခဟု အမည်တွင်သော မြန်မာကရုဘစ်ဖိုရမ်မှ ခေါင်းပြောင်ပြောင် နှင့် ဆံပင်ဖြူဖြူ လူကြီးဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်ကြသော စားဖိုမှုးများကတော့ နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာတစ်ခွင် တွင် ဟိုးလေးတစ်ကြော် ဖြစ်နေကြသည့် ကရုဘစ်ဖိုရမ်မှ ဆရာကြီးများ ဆရာမကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ စမ်းချက်ကြည့်ပြီးလျှင် သဘောကျက တီးမှတစ်ဆင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ ထံ ပြန်လည် ပြောကြားပေးပါမည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရောင်းရင်းများ၊ သယ်ရင်းများ၊ မိတ်ဆွေများ၊ ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများ အားလုံးကို တီးက ကျေးဇူးစကား ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ရယူရန် လိပ်စာများ - ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လခ့် တစ်ခုကိုသာ ရွေးပြီး ဒေါင်းဆွဲယူရင် ရပါပြီ။
ရယူရန် လိပ်စာ - ၁
ရယူရန် လိပ်စာ - ၂
ရယူရန် လိပ်စာ - ၃
ရယူရန် လိပ်စာ - ၄
ရယူရန် လိပ်စာ - ၅
အားလုံးဘဲ စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း။
ရေးသားသူ Tea at 6:18 PM
တူညီရာစာစဉ် Collection, Cooking
wow! thank you ko tea!
အင်း.. ချက်နည်းတွေကို က ခ ဂ .. အဲ့လိုမျိုး အစဉ်လိုက် စီပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်.. အခု ဟိုဆင်းလိုက် ဒီတက်လိုက် .. ရှာရတာ သိပ်အစဉ် မပြေဘူး.. ဒါပေမယ့် တီးရယ်.. ကြိုက်တယ်.. ပုံမှန်စာအုပ်တွေနဲ့ မတူဘူး.. အမျိုးအမည်တွေက .. အထူးအဆန်း လေးတွေပါတယ်... ခေါက်ဆွဲထုပ်ကို သုပ်တာတို့ ဘာတို့.. ကျေးဇူးဘဲ
April 27, 2008 at 5:12 AM
အော် ပြောရပါဦး မယ်.. ကို ဒုက္ခဆိုတာ က သူ့ပုံကို ကျွန်တော် က မှန်းဆထားခြင်းပါ။ အမှန်မဟုတ်ပါ။ :D
မှန်ချင်လဲ မှန်နေပါလိမ့်မည်။ :)
မောင်တီးတော့ အတီးခံချင်နေပြီထင်တယ် :D မောင်တီးဘလော့ဂ်မှာ ဖြန့်ချိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...
မသက်ထားခင်ဗျား ဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေခြင်းတွင် ဟင်းအမျိုးအမည်များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးပါမည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။